बेलायत Archives - Page 30 of 38 - Everest Times UK
पुन मगर संघ युकेद्वारा भूमे पूजा
चिम्खोले काइँला लन्डन । पुन मगर संघ युकेले बेलायतको फार्नबोरोस्थित कोडी बोमन स्पोर्टस क्लबमा भव्यताको साथ भूमे पूजा सम्पन्न गरेको छ । धौलागिरि सेरोफेरोमा बसोबास गर्ने मगरहरुले गत आइतबार भूमे...	Read more
गायिका इन्द्रको बिदाइ
मिलन तमु अल्डरसट । केही महिनादेखि बेलायतमा रहेकी नेपालकी लोकगायिका इन्द्र गुरुङको एक कार्यक्रमबीच बिदाई गरिएको छ । उनलाई गत शनिबार १९ मे साँझ अल्डरसटस्थित निरमाया रोधीं घरमा आफन्तजन, संगीतप्...	Read more
एटा संवाददाता लन्डन । सोंपाल समाज यु.के. को पाचौं महाधिबेसन ५ मे २०१८ का दिन नर्थहोल्ट पार्क सोसियल क्लबमा सम्पन्न भयो अध्यक्ष चन्द्र बहादुर गुरुङ, संस्थापक अध्यक्ष बिजय बहादुर गुरुङ, भु. पु...	Read more
हङकङका खेलाडीहरुलाई तमुधिं युकेद्वारा स्वागत
एटा संवाददाता लन्डन । १६ औं गोर्खा कप फुटबलका लागि हङ्गकङ्गबाट १५ जना खेलाडीसहित १९ जनाको टिम बिहीबार बिहान लण्डन आइपुगेकाे छ । उनीहरुलाई बिहीबार बिहान ६ बजे हिथ्रो विमानस्थलमा तमुधिं युकेका...	Read more
पत्रकार महासंघ युकेको अध्यक्षमा पुनः खपाङ्गी चयन
एटा सम्वाददाता अल्डरसट । नेपाल पत्रकार महासंघ युकेको अध्यक्षमा नरेश खपाङ्गी मगर पुनः निर्वाचित भएका छन् । पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाको गत शनिबार १९ मे का दिन अल्डरसटमा सम्पन्न चौथो अधिवेशनबा...	Read more
इलामको डकुमेन्ट्री सार्वजनिक
मुकेश राई लन्डन । इलाम समाज बेलायतले गृहजिल्लालाई विश्वव्यापी रुपमा चिनाउने हेतुले “इलाम हाम्रो पहिचान” नामक वृत्तचित्र शनिबार, १९ मईमा अल्डरसटस्थित एम्पायर हलमा सार्वजनिक गरेको छ । ग्रेटर र...	Read more
यस्तो छ एम्पायरमा दोहोरी घन्काउने तयारी (फोटोफिचर)
एटा सम्वाददाता अल्डरसट । नेपाली समुदायमा निकै चर्चामा रहेको एम्पायर बाङ्गक्युटिङ्ग एण्ड हलले जुन १ शुक्रबार साँझदेखि नियमित रुपमा दोहोरी प्रस्तुत गर्ने भएको छ । बेलायतमा नेपालीहरुको वृद्धि स...	Read more
तमु कलाकार सांस्कृतिक मञ्चको अध्यक्षमा चन्द्र
एटा सम्वाददाता लण्डन । तमु कलाकार सांस्कृतिक मञ्चको अध्यक्षमा चन्द्रबहादुर गुरुङ चयन भएका छन् । उनी गत आइतबार २० मे २०१८ मा लन्डन ह्यारोमा सम्पन्न मञ्चको अधिवेशनबाट निर्विरोध चयन भएका हुन् ।...	Read more
नेपाली कथानक चलचित्र मट्टीमाला रिलिजको तयारीमा
जानू काम्बाङ्ग लिम्बू लन्डन । नेपाली कथानक चलचित्र मट्टीमालाको पहिलो ट्रेलर चर्चित च्यानल हाई लाईटबाट सार्वजनिक भएको छ । मेरी बास्सैका चर्चित कलाकार बुद्धि तामाङ र रजनी गुरुङको रोमान्...	Read more
बेलायत । बेलायतका राजकुमार ह्यारी शनिबार अमेरिकी पूर्वअभिनेत्री मेगन मार्कलसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् । राजधानी लण्डनभन्दा झण्डै ३० किलोमिटर पश्चिममा रहेको विन्डसोर क्यास्टल (दरबार) को स...	Read more